ထိပ်တန်း YouTube Beauty Blogger Tati နဲ့ James ကြားမှာ ဘာပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ ? - For her Myanmar
ထိပ်တန်း YouTube Beauty Blogger Tati နဲ့ James ကြားမှာ ဘာပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ ?
ကဲ … ယောင်းတို့ရေ။ ဒီနေ့တော့ လူမှုကွန်ရက်မှာ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်နေတဲ့ YouTuber နှစ်ယောက်ကြားက ပဋိပက္ခလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အရင်ဆုံး YouTuber နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ယောင်းတို့သိအောင် ရှင်းပြပေးမယ်နော်။
Tati ကတော့ YouTube မှာ beauty blogger တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ပရိသတ်နဲ့သူ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်နေသူပေါ့။ HALO Beauty ဆိုတဲ့ ဗီတာမင်ကုမ္ပဏီ ဘရန်းဒ်တစ်ခုကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
James ကလည်း YouTube beauty blogger တစ်ယောက်ပါပဲ။ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် James ဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အောင်မြင်သူဖြစ်ပြီး ဂေးတစ်ယောက်ပါလို့လည်း ဝန်ခံထားပါသေးတယ်။ Cover Girl ရဲ့ ပထမဆုံးသော အမျိုးသား ambassador ဖြစ်ပြီး ဟိုတလောကမှ ကျင်းပသွားတဲ့ Met Gala ကို ပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ YouTuber ပါ။ ဒါပေမဲ့သူက ပြဿနာကို မီးထွန်းရှာသူလို့လည်း နာမည်ကြီးပါသေးတယ်။
Related article >>> Stylist တစ်ယောက်မှာ မဖြစ်မနေ ရှိရမယ့် အရည်အချင်း (၅)ရပ်
ပြောရရင် ဇာတ်လမ်းက မသန်းပဲလို့ ဆိုရမှာပဲ။ Tati နဲ့ James ကအရမ်းခင်တဲ့သူတွေပါ။ James ဒီလောကထဲကို စဝင်လာတည်းက Tati က စောင်မကြည့်ရှုခဲ့ပြီး James လိုအပ်သမျှ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေအကုန်လုံးကို Tati နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက လိုက်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လမှာတော့ James က Tati ရဲ့ Halo Beauty ကုမ္ပဏီနဲ့ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Sugar Bear Hair အတွက် ကြော်ငြာဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ မေလ (၁၀)ရက်နေ့မှာတော့ Tati ဘက်က “Bye Sister” လို့အမည်ရတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပြီး James နဲ့ သူ(မ)ကြားက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို အိတ်သွန်ဖာမှောက်ပြောပါတော့တယ်။
ဗီဒီယိုထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ ?
James အကူအညီလိုတဲ့အချိန်တိုင်း Tati နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ကူညီဖို့ ဝန်မလေးခဲ့ပါဘူး။ ဖုန်းထဲကနေ နာရီနဲ့ချီပြီး စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပက်သက်သမျှကို ကူညီခဲ့ပေးလို့ James ရဲ့ ဝင်ငွေက ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဒေါ်လာ ၉၀ ရနေရာကနေ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ထိ ထိုးတက်သွားတာပါ။ အမြဲတမ်းလိုလို မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ James ဘက်က သူ(မ)ကို လေးစားမှုမရှိဘူး၊ သူ(မ) အနေနဲ့ သစ္စာဖောက်ခံရသလိုခံစားရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီး မိသားစုဝင်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ ညစာစားနေတဲ့အချိန်မှာလည်း James ဘက်က မဖွယ်မရာတွေ ပြောခဲ့လို့ Tati မှာအကုန်လုံးကို ဖုန်းဆက်တောင်းပန်ခဲ့ရပါသေးတယ်တဲ့။ ပြောင်းလဲလာမယ် ထင်ခဲ့ပေမဲ့ James ဘက်က ဘာမှမထူးခြားလာတာကြောင့် သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။
Related article >>> Met Gala 2019 ကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဟောလိဝုဒ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်အဆန်းများ
Tati ရဲ့ ဗီဒီယိုပျံ့သွားပြီး မကြာခင်မှာ James ဘက်ကလည်း တောင်းပန်စကားဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု ပြန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက ဒါကိုလက်မခံပါဘူး။ နောက်ထပ်နာမည်ကျော်အများအပြားကလည်း James ရဲ့အကြောင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောလာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနာမည်ကျော်တွေထဲမှာ Jeffree Star, Shawn Mendes, နဲ့ Zara Larsson တို့ အပါအဝင်ပါပဲ။ Zara Larsson ကဆို သူ(မ)ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို James က စနိုက်ဖို့ကြိုးစားဖူးတယ်လို့ပါ ထုတ်ပြောသွားပါတယ်။ Demi Lovato, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Miley Cyrus, Katy Perry, Iggy Azalea စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ James ကို လူမှုကွန်ရက်မှာ unfollow တွေလုပ်သွားကြပါပြီ။
လက်ရှိ James က သူ့ရဲ့ subscriber ၂ မီလီယံအထိဆုံးရှူံးနေပြီဖြစ်ပြီး Tati ကတော့ subscriber တွေများသထက်များလာပါတယ်။ Tati ရဲ့ ဗီဒီယိုက ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄.၅ မီလီယံနဲ့ YouTube မှာ trending ဖြစ်နေပါပြီ။ James Charles ရဲ့ နာမည်ကတော့ ရစရာမရှိအောင် စုတ်ပြတ်သွားပါပြီ။ ဘာတွေ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲဆိုတာကတော့ …
ကဲ … ယောငျးတို့ရေ။ ဒီနတေ့ော့ လူမှုကှနျရကျမှာ အုတျအျောသောငျးနငျးဖွဈနတေဲ့ YouTuber နှဈယောကျကွားက ပဋိပက်ခလေးတှအေကွောငျး ပွောပွပေးသှားမှာပါ။ အရငျဆုံး YouTuber နှဈယောကျရဲ့အကွောငျးကို ယောငျးတို့သိအောငျ ရှငျးပွပေးမယျနျော။
Tati ကတော့ YouTube မှာ beauty blogger တဈယောကျပါ။ သူ့ပရိသတျနဲ့သူ အထိုကျအလြောကျအောငျမွငျနသေူပေါ့။ HALO Beauty ဆိုတဲ့ ဗီတာမငျကုမ်ပဏီ ဘရနျးဒျတဈခုကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပါသေးတယျ။
James ကလညျး YouTube beauty blogger တဈယောကျပါပဲ။ အသကျ (၁၉) နှဈအရှယျ James ဟာ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ အောငျမွငျသူဖွဈပွီး ဂေးတဈယောကျပါလို့လညျး ဝနျခံထားပါသေးတယျ။ Cover Girl ရဲ့ ပထမဆုံးသော အမြိုးသား ambassador ဖွဈပွီး ဟိုတလောကမှ ကငျြးပသှားတဲ့ Met Gala ကို ပထမဆုံးတကျရောကျနိုငျခဲ့တဲ့ YouTuber ပါ။ ဒါပမေဲ့သူက ပွဿနာကို မီးထှနျးရှာသူလို့လညျး နာမညျကွီးပါသေးတယျ။
Related article >>> Stylist တဈယောကျမှာ မဖွဈမနေ ရှိရမယျ့ အရညျအခငျြး (၅)ရပျ
ပွောရရငျ ဇာတျလမျးက မသနျးပဲလို့ ဆိုရမှာပဲ။ Tati နဲ့ James ကအရမျးခငျတဲ့သူတှပေါ။ James ဒီလောကထဲကို စဝငျလာတညျးက Tati က စောငျမကွညျ့ရှုခဲ့ပွီး James လိုအပျသမြှ စာခြုပျစာတမျးတှေ၊ အကွံဉာဏျတှအေကုနျလုံးကို Tati နဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူက လိုကျကူညီပေးခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့လမှာတော့ James က Tati ရဲ့ Halo Beauty ကုမ်ပဏီနဲ့ ပွိုငျဖကျဖွဈတဲ့ Sugar Bear Hair အတှကျ ကွျောငွာဗီဒီယိုတဈခုတငျခဲ့ပါတယျ။ မလေ (၁၀)ရကျနမှေ့ာတော့ Tati ဖကျက “Bye Sister” လို့အမညျရတဲ့ ဗီဒီယိုတဈခုတငျပွီး James နဲ့ သူ(မ)ကွားက ဖွဈကွောငျးကုနျစငျကို အိတျသှနျဖာမှောကျပွောပါတော့တယျ။
ဗီဒီယိုထဲမှာ ဘာတှပေါလဲ ?
James အကူအညီလိုတဲ့အခြိနျတိုငျး Tati နဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူက ကူညီဖို့ ဝနျမလေးခဲ့ပါဘူး။ ဖုနျးထဲကနေ နာရီနဲ့ခြီပွီး စာခြုပျစာတမျးနဲ့ပကျသကျသမြှကို ကူညီခဲ့ပေးလို့ James ရဲ့ ဝငျငှကေ ဗီဒီယိုတဈခုကို ဒျေါလာ ၉၀ ရနရောကနေ ဒျေါလာ ၂၅၀၀၀ ထိ ထိုးတကျသှားတာပါ။ အမွဲတမျးလိုလို မိသားစုဝငျတဈယောကျလို ဆကျဆံခဲ့ပမေဲ့ James ဘကျက သူ(မ)ကို လေးစားမှုမရှိဘူး၊ သူ(မ) အနနေဲ့ သစ်စာဖောကျခံရသလိုခံစားရတယျလို့ ပွောပါတယျ။ နောကျပွီး မိသားစုဝငျတှေ၊ သူငယျခငျြးတှအေကုနျလုံးနဲ့ ညစာစားနတေဲ့အခြိနျမှာလညျး James ဘကျက မဖှယျမရာတှေ ပွောခဲ့လို့ Tati မှာအကုနျလုံးကို ဖုနျးဆကျတောငျးပနျခဲ့ရပါသေးတယျတဲ့။ ပွောငျးလဲလာမယျ ထငျခဲ့ပမေဲ့ James ဘကျက ဘာမှမထူးခွားလာတာကွောငျ့ သူငယျခငျြးအဖွဈကနေ စှနျ့လှတျခဲ့တယျလို့ ပွောပွသှားပါတယျ။
Related article >>> Met Gala 2019 ကို တကျရောကျလာတဲ့ ဟောလိဝုဒျအနုပညာရှငျတှရေဲ့ အလနျးစားဖကျရှငျအဆနျးမြား
Tati ရဲ့ ဗီဒီယိုပြံ့သှားပွီး မကွာခငျမှာ James ဘကျကလညျး တောငျးပနျစကားဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုတဈခု ပွနျတငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူတှကေ ဒါကိုလကျမခံပါဘူး။ နောကျထပျနာမညျကြျောအမြားအပွားကလညျး James ရဲ့အကွောငျးတှကေို ထုတျဖျောပွောလာကွပါတယျ။ အဲ့ဒီနာမညျကြျောတှထေဲမှာ Jeffree Star, Shawn Mendes, နဲ့ Zara Larsson တို့ အပါအဝငျပါပဲ။ Zara Larsson ကဆို သူ(မ)ရဲ့ ခဈြသူကောငျလေးကို James က စနိုကျဖို့ကွိုးစားဖူးတယျလို့ပါ ထုတျပွောသှားပါတယျ။ Demi Lovato, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Miley Cyrus, Katy Perry, Iggy Azalea စတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေတော့ James ကို လူမှုကှနျရကျမှာ unfollow တှလေုပျသှားကွပါပွီ။
လကျရှိ James က သူ့ရဲ့ subscriber ၂ မီလီယံအထိဆုံးရှူံးနပွေီဖွဈပွီး Tati ကတော့ subscriber တှမြေားသထကျမြားလာပါတယျ။ Tati ရဲ့ ဗီဒီယိုက ကွညျ့ရှုသူပေါငျး ၄.၅ မီလီယံနဲ့ YouTube မှာ trending ဖွဈနပေါပွီ။ James Charles ရဲ့ နာမညျကတော့ ရစရာမရှိအောငျ စုတျပွတျသှားပါပွီ။ ဘာတှေ ဘယျလိုဆကျဖွဈကွဦးမလဲဆိုတာကတော့ …
Tags: beauty blogger, feud, james charles, tati westbrook, youtube
YouTube ရဲ့ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ထိပ်တန်းသီချင်း (၁၀) ပုဒ်
Stella May 6, 2019
Follow လုပ်ကိုလုပ်ထားသင့်တဲ့ အာရှမိတ်ကပ်ဘလော့ဂါ (၅) ဦး
Hnin Ei Oo January 14, 2019
၂၀၁၈ အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာ (၁၀) ခု
Sugar Cane December 13, 2018